UMatthew Roberts, usibonisa iApple Park esele igqityiwe Ndisuka mac
Ukusukela ngo-Septemba ophelileyo besingenayo ividiyo entsha kwinkqubela phambili ye-Apple Park kwividiyo, kwaye ngoku umqhubi wenqwelomoya owaziwayo u-Matthew Roberts, usishiya nerekhodi elitsha kunye nedrone yakhe ejikeleze indawo ebiyelweyo. Inyani yile yokuba unokubona ikhampasi yonke igqityiwe kwaye yile nto u-Apple wayecwangcisile ngaphandle kwento yokuba Izakhiwo zilahlekile ngaphakathi kwendandatho nangaphandle ukuba zigqitywe.
Ingabonakala Iziko leendwendwe ngoku livulekile nditsho nabantu ngaphakathi bethatha iifoto, inxenye yesangqa kuyo enye enevenkile okanye nedama eligcwele amanzi. Kufuneka sitsho ukuba bakufutshane ukugqiba umsebenzi kwaye ezi ziindaba ezimnandi kakhulu kuApple kwaye ngakumbi uninzi lwabasebenzi benkampani, ngaphandle kokulibala ukuba abanye babo bebekwiiofisi ezingaphandle kwendandatho ukusukela ngo-Epreli odlulileyo. .
Le yividiyo esibonisa inkqubela phambili ekupheleni kukaNovemba eyenziwe ngu UMateyu Roberts:
Ngoku kude kube sekupheleni konyaka, umsebenzi uya kuqhubeka rhoqo e-Apple Park kwaye umsebenzi awunakuyeka kude kube phakathi ku-2018, Asicacanga malunga nomhla wokugqitywa komsebenzi. U-Apple unyanzelisa ukuba yonke into igqibelele kwaye oku kunokuthetha ukulibaziseka kulwakhiwo lwangaphakathi njengoko sibonile kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo, kodwa ekugqibeleni uninzi lwe-Apple Park sele lukhangelekile kwaye ezi zixhobo zilandelayo ziya kuboniswa kule ndawo inkulu ngaphakathi kwe-Steve Imisebenzi yeTheatre njengoko kwenzekile ngeemodeli ezintsha ze-iPhone.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » UMatthew Roberts, usibonisa iApple Park esele igqityiwe